“Lampard waxa uu noqon karaa mid ka mid ah macallimiinta ugu wanaagsan dunida” – Gool FM
“Lampard waxa uu noqon karaa mid ka mid ah macallimiinta ugu wanaagsan dunida”
Dajiye May 12, 2020
(London) 12 Maaajo 2020. Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa taageero badan ka helay macallinkii Blues ku hoggaamiyay horyaalkoodii ugu dambeeyay ee Antonio Conte, kaasoo aaminsan in Lampard uu ka mid noqon karo macallimiinta ugu wanaagsan dunida.
Conte ayaa qaba in macallinka hadda hoggaamiya Chelsea uu ka socdo hannaan korriimo oo aad u wanaagsan, isagoo la hadlayay Sky Sports ayuuna sheegay in shaqo wacan uu hayo Lampard.
“Waxay ila tahay inuu Frank shaqo wanaagsan qabanayo xaqiidii.
“Waa xilligiisii labaad kaddib Derby County, sidaas darteed inaad macallin u noqoto koox heer sare joogta ma ahan mid fudud.
“Waxay ila tahay inuu leeyahay dhammaan xirfadaha iyo kartida uu kaga mid noqon karo macallimiinta ugu wanaafgsan dunida,” ayuu Conte ku ammaanay gooldhaliyaha ugu sarreeya taariikhda Chelsea haddana macallinka kooxdaas.
Ugu dambeyn tababaraha kooxda Inter Milan ayaa Lampard ku booriyay inuu sii wado shaqada wanaagsan ee uu hayo, isagoo u rajeeyay guulo hor leh.
Antonio Conte ayaa Chelsea soo maamulay intii u dhexeysay 2016 illaa 2018, isagoo u gacan galiyay horyaalka Premier League iyo koobka FA Cup.
Iska illow Arthur, Barcelona oo ciyaaryahan kale dhaafsaneysa Pjanic, iyo xiddiga qudhiisa oo wada hadallo kula jira Juventus